Vatobe eny Ampamarinana: misy fahavakisana 24 atahorana hianjera amin’ny fotoana rehetra | NewsMada
Vatobe eny Ampamarinana: misy fahavakisana 24 atahorana hianjera amin’ny fotoana rehetra
Voasokajy ho «faritra tandindomin-doza lehibe » ireo tanàna rehetra miorina eo ambanin’ireo vatobe eny Ampamarinana. Fantatra fa misy fahavakisana 24 hafa efa tsikaritra amin’ireo vatobe ka atahorana hianjera amin’ny fotoana rehetra. Noho izany, faritra tsy azo anorenana sy onenana intsony.
Taorian’ny loza niseho teny Ambanin’Ampamarinana, ny alahady teo, nisy ny filankevitry ny minisitra notarihin’ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry, ny harivan’iny. Nandraisana ny fepetra rehetra manodidina iny loza iny sy ny fanalana ireo mponina eny amin’ny nitrangan’ny loza izany. Fantatra mantsy fa misy vato maro maro mahatratra 24 eo ny fahavakisana efa hitan’ny BNGRC, mety hiparasaka tampoka ka hamoa-doza. Atahorana hianjera amin’ny fotoana rehetra mihitsy izany, araka ny voalaza. Nisy ny baiko avy amin’ny prefektioran’Antananarivo Renivohitra, amin’ny alalan’ny didim-pitondrana, ny amin’ny hialan’ireo mponina amin’iny faritra iny.
Nandray fanapahan-kevitra ny fitondrana hamindrana vonjimaika ireo traboina tsy maintsy mandao ny tranony eny amin’ny “Tanana Voara” Andohatapenaka sy eny amin’ny trano mora Iharinarivo Ambohidratrimo. Voalaza fa laharam-pahamehana ireo rava trano sy ny manodidina azy. Olana anefa indraindray ny fandaminana ireo olona, tsy manaraka ny fepetra apetraka. Efa niala ny sasany kanefa miverina eny an-toerana ihany. Noho ny tahotra ho very fananana?
Tsiahivina fa efatra ny maty tamin’ity loza ity, raha 11 ny naratra. Efa nahazo nody ny telo raha mbola manaraka fitsaboana ny valo. Tsy misy atahorana kosa ny momba ireo olona naratra ireo. Miantoka ny momba ny fitsaboana rehetra azy ireo ny fanjakana.
Nanampy nanala ny zandary
“Ankoatra ny fanentanana ireo mponina, efa maro ny resy lahatra hisintaka iny toerana nisehoan’ny loza iny, manome tanana ireo olona ireo ny zandary amin’ny fanampiana azy ireo hamindrana ny entana”, hoy ny zandary. Ny fiambenana ny faritra amin’ny mety ho fanararaotana ny tsy hisian’ny olona mipetraka, anisan’ny tanjona voalohany ao anatin’izany indrindra satria mety ho maro ny hanana eritreri-dratsy hamaky trano hangalatra fiatovana na entana tavela amin’izy ireny.
Mbola eny an-toerana ny zandary raha toa efa lasa fa nahavita ny anjarany ireo vondrona hafa. Misy ny “Aide, assistance et secours », isan’ny ampidirina ao anatin’ny sain’ny zandary tsirairay rehefa any amin’ny fiofanana fa tsy ny hampihatra lalàna rehefa misy fandikana lalàna ihany akory ka ho fampiharana izany no mbola ahitana ireo zandary maro eny an-toerana”, hoy ny fanamafisana. Hitohy ny fisiana zandary eny an-toerana izany na efa tsy hisy intsony aza aoriana kely ny olona hitatitra entana satria hisy hatrany ny fisafoana tsy tapaka eny tahaka ny efa nisy hatramin’izay, saingy hihamafimafy kokoa izany.